Budada Magnesium, MgB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Maamulaha guud ee 'Magnesium diboride' korantada, birlabta, kuleylka iyo wixii la mid ah. Wuxuu leeyahay codsiyo muhiim ah. Super sameeya magnets, khadadka gudbinta korantada iyo astaamaha dareemeyaasha magnetic
Caanaha molecular MGB2
Lambarka CAS 12007-62-4
Cufnaanta 2.57 g / cm3
Barta dhalaalida 830 C
Isticmaala Superconductor-ka Magnesium diboride ee korantada, birlabta, kuleylka iyo markaa wuxuu leeyahay codsiyo muhiim ah. Sameynta birlabta, khadadka gudbinta korantada iyo astaamaha dareemayaasha birlabta
Sidoo kale loo yaqaan magnesium borate
Caanaha kiimikada MgB2
Miisaanka muruqyada 45.93
Lambarka CAS 12007-25-9
Qodobka dhalaalida 830 ℃
Cufnaanta ayaa ah 2.57g / cm3
Magnesium diboride waa dhisme ionic leh qaab dhismeedka meyl laba-geesoodka ah. Waa qalab jilicsan oo adag oo leh duleelin liidata. Waa isku xirnaan. Lakabyada Magnesium iyo boron ayaa si isku mid ah loo abaabulaa. Waxay isku badali doontaa superconductor heerkul waxyar u dhaw heerkulka saxda ah ee 40K (ie - 233 ℃). Heerkulkeeda ku-meel-gaadhku wuxuu kudhowaad laba jibbaar ka sarreeyaa kuwa kale ee superconductors-ka oo isku nooc ah, heer kulka saxda ah ee shaqaduna waa 20 ~ 30K. Heerkulka ku-meel-gaadhka ah ee heer-kulmeedka MgB2 waa 39K, oo laga jaray 234 ℃, taas oo ah heer-kulka ugu sarreeya ee heer-kul sarreeya ee superconductors-ka xarunta macdanta ah. Maaddaama ay tahay maaddad cusub oo leh awood-gudub, magnesium diboride waxay fureysaa hab cusub oo lagu barto jiilka cusub ee semiconductor heerkulka sare leh qaab fudud. Superconductor magnesium diboride waa dhisme bir ah oo ay sameeyeen iskudarka magnesium iyo boron marka la barbar dhigo 1: 2. Waxaa lagu gartaa kheyraad fara badan, qiimo jaban, kala-goyn heer sare ah, isku-dhafnaan fudud iyo hawl-socod fudud.
Sababtoo ah MgB2 way fududahay in laga sameeyo filimo khafiif ah iyo fiilooyin, waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa soo saarista aaladaha CT iyo aaladaha kale ee elektarooniga ah, qaybaha kombuyuutarrada waaweyn iyo qaybaha qalabka gudbinta awoodda. Waxay leedahay rajo ballaaran oo codsi oo ku saabsan elektaroniga iyo kombiyuutarka. Nooc ka mid ah cufnaanta sare MgB2 muunad superconductor ayaa si guul leh loogu soo saaray isku-dubaridka heerkulka sare iyo habka cadaadiska sare ee Shiinaha, oo ku dhow heerka caalamiga ah. Codsiyada suurtagalka ah ee MgB2 waxaa ka mid ah magnets superconducting, khadadka gudbinta korantada iyo astaamaha dareemeyaasha magnetic. 2001-dii, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in isku-darka astaamaha qoraalka, magnesium diboride, uu isku beddelayo superconductor heerkul waxyar u dhow heerkulka saxda ah ee 40K (- 233 ℃). Heerkulkeeda ku-meel-gaadhku wuxuu kudhowaad laba jibbaar ka sarreeyaa kuwa kale ee superconductors-ka oo isku nooc ah, heer kulka saxda ah ee shaqaduna waa 20 ~ 30K. Si loo gaaro heerkulkan, neon dareere ah, haydrojiin dareere ah ama qaboojiyaha wareegga xiran ayaa loo isticmaali karaa in lagu qaboojiyo heerkulka.
Marka loo barbardhigo qaboojinta warshadaha ee niobium alloy (4K) oo leh dareere helium, qaababkani waa kuwo fudud oo kharash badan. Markii lagu daadiyo kaarboonka ama nijaasta kale, awoodda magnesium borate si ay u ilaaliso superconductivity wax aan ka yarayn tan daloolka niobium ama xitaa ka sii wanaagsan marka laga hadlayo goobta birlabta ama hadda. Codsiyada suurtagalka ah waxaa ka mid ah magnets superconducting, Khadadka gudbinta awoodda iyo qalabka xasaasiga u ah aaladaha birlabta.
Hore: Budada Silicon Boride, SiB6
Xiga: Nickel Boride Powder, Ni2B
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Magnesium boride'
Warshadda budada loo yaqaan 'Magnesium boride bor'
Soosaaraha budada magnesium boride
Soosaarayaasha budada magnesium boride
Budada Magnesium boride Qiimaha
saaraha budada magnesium boride